Aletris (အလတ်ထရစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Aletris (အလတ်ထရစ်)
Aletris (အလတ်ထရစ်) ကဘာလဲ။
အလတ်ထရစ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Aletris ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အစာခြေစနစ် ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လေထခြင်း
လူအချို့ဟာ သူ့ကို general tonic (သို့) စိတ်အပန်းပြေစေဖို့ အိပ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Aletris ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Aletris ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အလတ်ထရစ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Aletris နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
Aletris ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
အလတ်ထရစ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
အလတ်ထရစ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Aletris ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အလတ်ထရစ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Aletris ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Aletris နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ antacids, H2 blockers နဲ့ proton pump inhibitors တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Aletris ဟာ အစာအိမ် အက်ဆစ်ကို တက်စေတာကြောင့် အစာအိမ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ H2 blockers နဲ့ proton pump inhibitors တို့ရဲ့ အစွမ်းထက်မှုကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Aletris နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်၊ အူ ပြဿနာများ
ဟော်မုန်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာနဲ့ သားအိမ် အလုံးတည်ခြင်း
အလတ်ထရစ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အလတ်ထရစ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Aletris ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Aletris. https://www.drugs.com/npp/aletris.html. Accessed March 11, 2017.
Aletris. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-605-aletris.aspx?activeingredientid=605&activeingredientname=aletris. Accessed March 11, 2017